असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास, के गर्ने ? के नगर्ने ? - Narayanionline.com
अधिकमास (मलमास) मा के गर्ने रु के नगर्ने?
यसअघि २०७५ जेठ महिनामा अधिकमास परेको थियो । असोज महिनामै अधिकमास भने विसं २०५८ मा परेको थियो । १९ वर्षपछि फेरि असोज महिनामै मलमास परेको छ । असोज महिनामा पर्ने मलमासमा दक्षिणी देशमा सङ्घर्ष हुने ज्योतिषशास्त्रको ग्रन्थ संवत्सर संहितामा उल्लेख गरिएको ज्योतिषी पोखरेलले बताउनुभयो । मलमासमा विशेष गरी भगवान् पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गरी मालपुवा दान गरे पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ ।रासस
माथिल्लो तामाकोशीको काम सुस्त, कुलमानले गरे निरीक्षण
कोरोना नियन्त्रणमा काँग्रेसले देखायो सक्रियता, पूर्वप्रधानमन्त्रीसंग देउवाले गरे टेलिफोनमा छलफल
मन्त्री भट्टराईद्धारा निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलको निरीक्षण,५४ प्रतिशत काम सम्पन्न